sayensị na teknụzụ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Udi: sayensị na teknụzụ
Igwe igwe mpempe akwụkwọ nyocha (foto)
Na ọnọdụ nke ụlọ pere mpe pere mpe, nsogbu na - ebilite n'ihe metụtara itinye ụlọ ọrụ. Ọ bụ ya mere ihe eji emepụta kichin gụnyere ọtụtụ ihe dị iche iche a na-ejighị esi nri. Karịsịa, ịsa ...
Nokia S7: atụmatụ ekwentị na nyocha
“Nokia S7 00”, njirimara ndị a ga-atụle n'isiokwu a bụ naanị ndị ọrụ na-akpọ “Nokia S7”. Enyere ekwentị a ọpụrụiche pụrụ iche n'usoro Nokia. N'ezie, nke a bụ ama nke abụọ ...
Ekwentị "Nokia Lumiya 530": nyocha, nkọwapụta
Ihe na 15.09.2019 23.12.2019
Ekwentị Nokia Lumia bụ otu kachasị ewu ewu na Russia. Ndị na - egwu egwu elektrọnik sitere na Russian Federation na - asọpụrụ Finnish (karịa nso nso a - de jure American) - n'eziokwu a maara ama ama nke ọma na ...
MTS 982 Smartphone: nyochaa, nyochaa nke ndị nwe na àgwà nke ekwentị
Ihe na 15.09.2019 19.08.2019
N'afọ 2014, dịka ọdịnala nke ọtụtụ ndị ọrụ hụburu n'anya, ọ ga-ekwe omume ịzụta igwe eji emezi ekwentị site n'aka onye ọrụ na ọnụ ahịa mara mma. Oge a ka enyere anyị ihe nlere ahụ bụ MTS 982. Ọnụ ahịa ya bụ ...
Nokia X6: nkọwapụta, ntuziaka, foto
N’ebi n’ụwa nke ugbu a, o siri ike iche n’echiche onwe gị n’etinyeghị nnukwu ihe dị ugbu a dịka ekwentị. Anyị chọrọ ya maka ọrụ, ọmụmụ ihe, isoro ndị anyị hụrụ n'anya na-ekwurịta okwu, yana naanị iji zuo ike. ...
Onu ogugu ego nke ugwo "Ekele diri gi" site na Sberbank MTS. Etu ịkwụ ụgwọ site na "onyinye ekele" sitere na Sberbank MTS?
Ugbu a, nzukọ MTS na-akwado ọtụtụ ọfịs, otu n'ime ha bụ Sberbank. Ekwesịrị iburu n'uche na ha nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọrụ ndị ọrụ, dịka ọmụmaatụ, "Paymentkwụ ụgwọ site na MTS na ego," Daalụ site na ...
Fly 4416 nkọwa ekwentị
Phonedị ekwentị mkpanaaka na-ewu ewu karịa ngwaọrụ ndị ọzọ na-asọmpi, mana ha nwekwara ọtụtụ uru. Nanị ihe ndọghachi azụ nke ụdị ihe nlereanya a nwere ike ịkpọ naanị ọkà okwu mkparịta ụka dị jụụ. Agbanyeghị, nke a bụ naanị ...
Igwefoto dị n'ihu - gịnị kpatara eji achọrọ ya na otu esi eji ya?
Ihe na 15.09.2019 11.10.2019
Taa, ndị na-eme smartphone na-anwa 'iti' ibe ha ihe site na ịgbakwunye modulu ọhụrụ na atụmatụ ngwaike na ngwaọrụ ha. Kemgbe afọ ise, a matawo ihe dị ka igwefoto n’ihu n’ahịa mkpanaka. Tupu ...
Igwe igwe na-agbachi nkịtị: anyị na-eme nhọrọ
Oge agafeela bụ mgbe usoro ịsa ahụ nyere ndị nwunye nnukwu nsogbu. Enweghịzi mkpa ịta akwa akwa na mkpuchi mkpuchi maka abalị ma ọ bụ ịkwatu akpụkpọ ahụ aka gị ruo ọbara ...
Kedu ihe bụ ọdọ mmiri nke?
Otu ihe dị n’ime ngwa elektrọn ọgbara ọhụrụ bụ diode. A na-eji ya na sekit ebe ọ dị mkpa idozi AC, a na-ejikwa ya n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ ngwa ụlọ niile. You nwere ike ịchọta ya na TV,…
Esi họrọ otu mbadamba nkume na ezigbo igwefoto na batrị (nyochaa)
Igwe eji eme ihe eji eme ihe nke ugbua sara mbara nke na ime nhọrọ, n’ezie, odighi nfe. Enwere ọtụtụ ụdị dị iche na ọnụahịa, onye nrụpụta, nkọwa ọrụ aka. Ọbụna ime ...
Ezi Nweta: nyocha. Njikọ ekwentị
Ọ bụghị ihe nzuzo na oku mba ọzọ na-eje ozi na ọnọdụ ọgba aghara. Ọ pụtara na onye debanyere aha ya anaghị eji ọrụ nke onye ọrụ ya, mana nke ụlọ ọrụ si mba ọzọ ka ọ kwụọ maka ọnụọgụ ọ chọrọ (site na mgbasa ozi ...
Microwave convection: gini ka ọ bụ? Microwave na convection na grill
Ọ bụrụ n’ikpebie igbanwe microwave ochie gị ka ọ bụrụ nke ọhụrụ, mgbe ahụ ụdị n'ụdị taa ga-eju gị anya. A na-agbanye n'ọkụ ngwa ngwa microwave ndị a na-ahụkarị bụ nyocha (nyocha banyere ha naanị ...
Windows Lumia 435 Microsoft: nyocha, atụmatụ na nyocha
Lumia 435 bụ usoro ihe eji emefu ego na-atọ ụtọ. Nke a bụ ngwaọrụ mbụ dị na ahịrị 400s, nke a na-elebara ndị na-ege ntị lekwasịrị anya anya nke dị iche na ọtụtụ ụdị nke ika ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ smartphone maka nwatakịrị, ọdịda ma ọ bụ ...
Kedu ihe GP nke diode na ihe bụ nzube ya?
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ akụrụngwa na-echefu na, n'adịghị ka ngwaọrụ akwara, televishọn na akụrụngwa ndị ọzọ dị n'ụlọ, ọ na-ajụ oke mmiri na nsonaazụ ya na-enye malfunctions na ọbụna ...
Mkpali RS. Thekpụrụ nke ọrụ, eserese arụmọrụ, tebụl ntụgharị
Ihe a na - eme bụ ngwaọrụ dị mfe, nke bụ igwe dijitalụ. O nwere steeti nkwụsi ike abụọ. Otu n'ime steeti ndị a ka enyere ọrụ “1”, nke ọzọ - “0”. Ọnọdụ mkpalite, yana uru ọnụọgụ abụọ ...
Ekwesịrị m ịzụta mbadamba Xiaomi? Nyocha na nyochaa nke kachasị mma
Ahịa maka kọmputa kọmputa, dị ka ama, na-agbanwe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ụnyaahụ enwere ike ịkpọ Apple na Samsung ndị isi ụlọ ọrụ na-enweghị mgbagha, taa ndị nrụpụta ndị ọzọ na-ejide ha. Otu n’ime ha…
Esi mejuputa ihe ntaneti Canon onwe gi
Ndị na-ebi akwụkwọ inkjet bụ ihe kachasị akwụ ụgwọ maka iwepụta ozi dijitalụ na akwụkwọ. Enwere ụlọ ọrụ ole na ole na-etinye aka na mkpopụta ụlọ ọrụ ndị ahụ. Ndị a bụ Epson, Canon na HP. Ndị ọzọ…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,426.